Nkedo E-Bike Manufacturers & Suppliers - China Folding E-Bike Factory
Gbaa ịnyịnya na ọdịnihu
Ndị injinia anyị na-arụ ọrụ nke ukwuu na igwe eletriki eletriki R&D na igwe eletrik.
SEBIC 16 nke anụ ọhịa ahụ dị obere taya ...
SEBIC 700C zoro ezo batrị v ...
SEBIC 20 nke anụ ọhịa 8 ọsọ ọsọ suspe ...
SEBIC 20 nke anụ ọhịa 8 ọsọ ọsọ ọsọ 48v 500w na-atụgharị igwe elektrọnik
Itinye moto 500 w e-igwe kwụ otu ebe dị mfe dị ka ịpị aka - ihe mmetụta ọsọ ọsọ na-agwa batrị ka ọ banye na enyemaka ọsọ ọsọ na-eme ka ịpụ ngwa ngwa na nwayọ. Site na ihe ndozi na akwa aka nwere ike idogharị, ndị na-achọ iwebata na ụwa nke gburugburu ebe obibi na-aga njem nwere ike ịme nkasi obi site na mpempe akwụkwọ mpịachi a na-atụ egwu.
Ụba size bụ 16inch, Ìhè na Mgbanwe, oké arọ bụ banyere 20KG, ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka njem.
Ebike nwere nkwusioru n'azụ na-eme ka ahụ ruo gị ala mgbe ị na-agba n'okporo ụzọ ugwu.
SEBIC 20 nke anụ ọhịa mini ụzọ foldable ebike
AKW 250KWỌ AKW 250KWỌ AKW 250KWỌ 250W-350W: A kwadebere ya na 350W igwe na-enweghị brush, na-agbakwunye n'azụ ụkwụ, na-eme ka ike ịrị elu ugwu dị elu, na-enye ike zuru oke maka njem gị kwa ụbọchị, na-aga n'ugwu ma ọ bụ na-agagharị n'okporo ụzọ kachasị amasị gị. Na gbapụrụ ọsọ ruo 20 mph, ọ ga-enweta gị ebe ahụ ọsọ ọsọ. Mfe imeghari ka iche iche terrains, na-ewere gị na-enwe n'èzí fun.
SEBIC 26 nke anụ ọhịa aloywheel obodo sọrọ igwe eletriki igwe eletriki
JIRI EGO NA 7 - gbagoo ugwu dị ka onye isi nke igwe eletrik eletrik a nke SHIMANO 7 na-agba ọsọ ọsọ maka nkenke a pụrụ ịdabere na ya ma na-achịkwa njikwa nke ndị ọ bụla na-agba ịnyịnya na-achọ.
SEBIC ọkụ ọhụrụ na-atọ ụtọ 20 nke anụ ọhịa mpịachi igwe eletriki igwe eletriki
Ngwunye igwe eletrik dị ike nwere ike ịkwado onye ọrụ ruo 220lb, 240W dị ike, 15-25km dị ọcha eletrik, na 25-35 km site na enyemaka ike. Igwe eletrik a ga-enye gị njem dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma maka ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, enweghị ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko. Ọzọkwa, site na imebi emebi, ọ nwere ike ịchekwa ohere nchekwa na nchekwa mgbe ị na-ejighị ya.
SEBIC Nkwalite 20 nke anụ ọhịa na-emegharị igwe eletriki igwe eletriki
Mmemme eLife Infusion zuru oke maka ndị na-achọ azịza a pụrụ ịdabere na ha maka njem ha kwa ụbọchị ma ọ bụ ịnyagharị ntakịrị oge ezumike. Infusion ga-eburu gị kilomita iri atọ na 15.5mph na otu ụgwọ (agbara ga-adabere na ịdị arọ nke onye na-agba ịnyịnya na ala mkpuchi).
SEBIC agagharị obodo foldị 16 nke anụ ọhịa ọkụ eletrik eletrik
SEBIC Foldable arọ abụba taya zuru nkwusi 20 nke anụ ọhịa moutain igwe eletriki igwe
Frame size bụ 20inch, aluminum alloy, abụba ebike ịke, dị nnọọ ike ma dị jụụ.